गाई काट्ने अतिवादी कुरा किन ?
बुद्धबादीहरु शान्तिप्रिय हुन्छन् । शान्ति बुद्धमार्गीको पहिलो पाइला हो । शान्तिबाटै निर्वाण प्राप्तिको जप तप ध्यान गर्ने समुदाय हो बुद्धिमार्गी । यिनै बुद्धमार्गी केही व्यक्तिहरु आफूलाई किराँतबादी, तामाङजाति पनि भन्छन् र नारा लगाउन थालेका छन्– गाई गोरु काट्न पाउनुपर्छ । खान पाउनुपर्छ । हाम्रा देवताको पूजामा गोरुको टाउको राख्नुपर्छ । यस्ता अतिवादी कुरा गर्नेमा सभासद् छन्, ३ नम्बर प्रदेश सभाकी उपाध्यक्ष छिन् र गृहमन्त्रीले समेत तिनको कुरा सुनेर, ज्ञापनपत्र लिएर तिनकै पक्षपोषण गरेका सम्मका समाचार आए ।
जातिवादको कुरा किन ? संविधानमा गाई राष्ट्रिय जनावर भनिसकेपछि गाई नै काट्न पाउनुपर्छ भनेर भन्नुको कारण के हो ? बल्ल स्थिर सरकार बनेको छ, शान्ति, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य बोकेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको छ । यो सरकारलाई ढाल्न, अलोकप्रीय पार्न र जातीय तथा भेगीय बिखण्डनवादीलाई मलजल हाल्न आङकाजी शेर्पाजस्ता व्यक्तिहरु गाईगोरु काटिन्छ काटिन्छ, काट्नेलाई पक्राउ गर्न थुन्न पाइन्न भनेर हल्ला गरिरहेका छन् ।
सबैलाई थाहा छ, नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुक हो । अनेकतामा एकता नेपालको विशेषता हो । यो सन्तुलनलाई बिगार्न किरात, बौद्ध, मुस्लिम र क्रिश्चियनले गाई गोरु काटेर खान पाउनु पर्ने, यिनको संस्कृति हो यो भनेर भन्नु र युरोपियन युनियन जिन्दावाद भन्नु घातक कुरा हो, देशवादीले यसो गर्छन् र ?